ल्यापटप वा पीसी (कम्प्यूटर): पेशेवर र विपक्ष | TeraNews.net
ल्यापटप वा पीसी (कम्प्यूटर): पेशेवर र विपक्ष
लेखक तेरा समाचार प्रकाशित गरिएको छ 13.03.2019
एक छनौट गर्नुहोस्: एक ल्यापटप वा पीसी? समय बर्बाद नगर्नुहोस् - लेख पढिसकेपछि, तपाईं तुरुन्त निर्णय लिनुहुनेछ कि के खरीद गर्ने।
ल्यापटप वा पीसी: दोस्रो हात
सन्दर्भमा, प्रयोग गरिएको उपकरण वा नयाँ, स्टोरबाट - खरीददार छान्नुहोस्। मूल्यमा मात्र भिन्नता। र महत्त्वपूर्ण - ल्यापटप वा कम्प्युटर BU ले नयाँको तुलनामा सस्तो 2-3 पटक खर्च गर्दछ। तर त्यहाँ असफलताको सम्भावना 50% छ। एक विक्रेताको वारेन्टीको अनुपस्थितिले आफ्नै खर्चमा उपकरण मर्मत गर्न नेतृत्व गर्दछ। तसर्थ, लाभहरू धेरै कुहिरो देखिन्छ।
गतिशीलता। सानो आकार र तौल, प्रदर्शनको उपस्थिति, माइक्रोफोन र इनपुट उपकरणहरू (टचप्याड, किबोर्ड), स्वायत्त शक्ति र वायरलेस नेटवर्कहरूको पहुँचको साथ स्पिकरहरू। ल्यापटप ब्यापारिक व्यक्तिहरूको लागि आदर्श हो जसले निरन्तर घर र कामका बिच चल्नु पर्छ। पार्क, क्याफे, कार्यालय, व्यापार यात्रा - एक मोबाइल कम्प्युटर एक अपरिहार्य सहायक बन्नेछ। घरमा, ल्यापटपले टेबुलमा ठाउँ लिदैन। केबलहरूको पूर्ण अनुपस्थितिले तपाईंलाई घरको वरिपरि उपकरणहरू सार्न अनुमति दिन्छ। अभिभावकहरूको लागि, एक ल्यापटप सही समाधान हो।
कार्यात्मक। ल्यापटप ड्राईवर र सफ्टवेयरको साथ आउँदछ, र अक्सर विन्डोज अपरेटिंग प्रणालीको साथ। बटन थिच्नुहोस् - र डेस्कटपमा तपाईंलाई चाहिने सबै। USB र भिडियो आउटपुटको उपस्थिति, मोबाइल उपकरणको कार्यक्षमता विस्तार गर्दछ। मनिटर वा टिभी, बाह्य किबोर्ड, माउस, प्रिन्टर, स्क्यानर, फ्याक्स जडान गर्न यो सजिलो छ। ल्यापटप, यदि चाहानुहुन्छ, राउटरमा परिणत हुन्छ जुन Wi-Fi मार्फत इन्टरनेट वितरण गर्न सक्दछ।
अपर्याप्त पोशाक प्रतिरोध। ल्यापटप क्षति गर्न सजिलो छ: ड्रप, क्रश, तरल पेयहरू खन्याउनुहोस्। ब्याट्री, अनुचित प्रयोगको साथ, वर्षौंमा लगाउँदछ, क्षमता गुमाउँदै। बिल्ट-इन कूलि system प्रणाली उत्तम छैन - भेन्टिलेसन प्वालबाट ल्याइएको धुलो संकलन गरेपछि, ल्यापटप ओभरहिट भएपछि यो बाहिर निस्कन्छ।
आधुनिकीकरणको लागि कम अनुकूलता। स्मार्ट एसएसडी ड्राइव राख्नुहोस् र र्याम थप्नुहोस् - यो यो हो कि ल्यापटपको वेग बढाउने सल्लाह दिइन्छ। तर 3-4 वर्षको अपरेशन पछि, भिडियो कार्डको साथ प्रोसेसरको लागि प्रश्नहरू खडा हुनेछन्, जुन मोबाइल उपकरणको मदरबोर्डमा कडाईका साथ बेचेका छन्। केवल एक ल्यापटप बदल्दै - अन्यथा प्रदर्शन सुधार गर्न सकिदैन।
व्यक्तिगत कम्प्युटरहरू (पीसीहरू): फाइदा
उचित मूल्यवान डिजाइनर। कम्प्युटर सजिलैसँग प्रयोगकर्ताको कार्यहरूसँग मिल्दछ। लोकप्रिय कार्यक्रम वा खेलहरूको छनौटमा। पीसीहरूको लागि स्पेयर पार्ट्स विनिमेय हुन्छन्, त्यसैले आधुनिकीकरणको मुद्दा पनि हराउछ। तपाईको डेस्कटपमा ठाउँ बचत गर्नु आवश्यक छ - कृपया माइक्रो हाउसिंग। हजारौं भिन्नताहरू।
प्रयोगमा सजिलो। ठूलो मोनिटरको अगाडि सफ्ट कुर्सीमा इन्टरनेट चलाउन, चलाउन वा ब्राउज गर्नु पीसीको आरामको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। कम्प्युटर मल्टिमेडिया उपकरणहरू जडानको मामलामा धेरै कार्य गर्दछ। धुलो वा अत्यधिक गरम गर्ने - यो अवधारणा अनुपस्थित छ, पीसी धुलोको समयमै सफा गर्दै (1 वर्षमा एक वा दुई पटक)।
व्यक्तिगत कम्प्युटरहरू: बेफाइदाहरू
थोक। मोनिटर, प्रणाली एकाई - ब्रेकडाउन को मामला मा, तपाईं घर मा एक विशेषज्ञ कल गर्नु पर्छ। अन्यथा, त्यहाँ पुन: जडान गर्दा प्लगहरूमा समस्या हुनेछ। तपाईले कार्यस्थलको पनि हेरचाह गर्नुपर्नेछ - एउटा टेबल, आर्मचेयर, विद्युतीय आउटलेटको उपस्थिति र इन्टरनेटमा जडानका लागि केबल प्रविष्टि।
ताररहित संचारको अभाव। वाइफाइ नेटवर्क वा3/ 4G मा जडान गर्न, तपाईंले उपयुक्त उपकरणहरू खरीद गर्न आवश्यक पर्दछ। सामान्यतया, एउटा कम्प्युटरले प्रयोगकर्तालाई वर्कस्टेशनमा बाँध्छ।
तल रेखा: ल्यापटप वा पीसी (कम्प्युटर)?
खेलहरूका लागि - पक्कै पनि एक व्यक्तिगत कम्प्युटर। यो अपग्रेड गर्न सजिलो छ, अति तापका साथ कुनै समस्याहरू छैनन्। हो, र 4-5 घण्टा बस्नुहोस्, दुश्मनहरू चकनाचूर पार्दै वा एक साम्राज्य रक्षा एक ल्यापटप को उपयोग भन्दा धेरै सुविधाजनक छ।
मन पर्छ गतिशीलता - मात्र एक ल्यापटप। उनीहरूले घरमा काम गरे - तिनीहरूले ढकनी बन्द गरे र एउटा क्याफे वा अफिसमा सरे। ब्याट्री चार्ज निगरानी गर्न नबिर्सनुहोस्। हामी 2-3 चार्जरहरू किन्न सिफारिस गर्दछौं: घर, कार्यालय र कार चार्जका लागि।
कम्प्युटर खोज्नुहोस् अभिभावकको लागि - एक ल्यापटप। सबै संचार, गतिशीलता, अपरेशनको सजिलो। सुविधाका लागि माउस किन्नुहोस्, किन कि वृद्ध व्यक्तिको टचप्याडसँग कुनै मैत्री छैन।
बच्चाहरू यो एक व्यक्तिगत कम्प्युटर किन्न राम्रो छ। आधुनिकीकरणको सम्भावना, र प्रणाली एकाईको अवयवहरूको लागि अपुग्यताले उपकरणको जीवन विस्तार गर्दछ।
टेक्लास्ट टिबोल्ट १० - कूल स्टफिंगको साथ ल्यापटप
फ्रेमवर्क ल्यापटप - यो के हो, सम्भाव्यताहरू के हुन्
Asus Chromebook फ्लिप CM300 (ल्यापटप + ट्याब्लेट) बाटोमा
ASUS स्काई चयन २ राइजेन G००० गेमि L ल्यापटप
गेफोर्स आरटीएक्स xx० एक्सएक्सएक्स ग्राफिक्सको साथ ल्यापटपहरू - एसस बनाम एमएसआई
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी क्रोमबुक २ - पुनर्वसन?